Tanzania inogadza National Convention Bureau
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Tanzania inogadza National Convention Bureau
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Investments • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • Kuvakazve • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
Tanzania yakagadza Nationoal Convention Biurea apo zvirongwa zviri kutanga kuita kusiyanisa zvinopihwa zvekushanya nekusvika kune vashanyi vanopinda misangano nemisangano. Nekupa dzimwe nzvimbo, nyika inogona kupa mari kune vashanyi vatove munyika kuti mabhizinesi atore chikamu mune zvimwe zviitiko zvekushanya.
Tanzania ikozvino yakanangana nevashanyi vemusangano muhurongwa hwayo hwekukwezva misangano uye vashanyi vemusangano senzira yekusiyanisa kushanya kwemhuka dzesango kune mamwe magineti anokwezva evashanyi anosanganisira enhoroondo, enharaunda, uye tsika.
National Convention Bureau (NCB) yakavambwa kusimudzira kushanya kwemusangano. Zvimwe zvirongwa zviri kuitika zvinosanganisira kusiyaniswa kwezvigadzirwa zvevashanyi kunze kwezve zviwanikwa zvemusango izvo zvanga zviri dura guru rekushanya kwenzvimbo iyi yeku Africa.
Permanent Secretary mubazi rezveKushanya, Dr. Aloyce Nzuki, vakati mahofisi emumiriri eTanzania munyika dzakasiyana siyana pasi rese achashandiswa kukoka kumisangano yemarudzi akawanda ichaitwa muTanzania.
NCB iri pasi pekufambiswa kweTanzania Tourist Board (TTB), yakapihwa basa kuronga zvese uye kubhuka kumisangano yepasi rose, misangano, misangano, uye mimwe misangano, akadaro Dr. Nzuki.
Musangano wakasarudzika uye wekokorodzano unovhurwa muTanzania guta guru rezvekutengeserana reDar es Salaam pagungwa reKigamboni satellite, nzvimbo yekutandarira neyemahombekombe inokodzera vashanyi vemuno nevekunze.
Musangano wekushanya sechigadzirwa chakakosha chekushanya chisina kubatwa zvakafanira munguva yakapfuura, kunyangwe paine mukana wakakura wekukomberedza akawanda emahombekombe uye mhuka dzemusango dzakazara muTanzania.
Mwedzi wapera, Bazi rezveKushanya rakaparura dhatabhesi yemagetsi yekutarisa mhando yemabasa ekugara evashanyi munyika sechirongwa chingabatsira kusimudzira mabasa evashanyi.
Iyo dhatabhesi inoongorora mamiriro emari pakati pevashanyi venyika uye kugona kwavo kuita mari yebasa kunzvimbo dzekugara kunze kwemahotera anodhura uye dzimba dzekugara dzinopa mapakeji anodhura.
Nzvimbo dzekugara muTanzania dzinoenderana neEast African Hotel Classification nzira yekuona mhando yekupihwa kwesevhisi kune vashanyi nevamwe vashanyi kuTanzania nedzimwe nyika dzeEast Africa Community (EAC), akadaro Dr. Nzuki.
Dhatabhesi yemagetsi ichabatsirawo zviremera zvekushanya kuti zviwane ruzivo kubva kuZvinotarisirwa Zvekugara Zvivakwa muTanzania kuitira kuti ive nechokwadi chemabasa akanaka kune vatengi kuti vaenzane nematanho eECC.
Nzvimbo Dzakatenderwa dzekugara ndedze mahotera emutaundi, mahotera ezororo, dzimba dzekugara, mamotels, makambi ane tende, dzimba dzekuvakira, dzimba dzekugara, dzimba dzinoshandirwa, uye maR = maresitorendi.
Pakupera kwegore rapfuura, Tanzania yakanga iine zvivakwa zvekugara zvakanyoreswa makumi matatu nesere neStar Class, kubva pamakumi matanhatu nenomwe anowanikwa mumakore mashanu apfuura.
Zano reTanzania rekuparadzanisa kushanya riri munzira imwechete nepfungwa yeiyo African Tourism Bhodhi (ATB) kusimudzira nekutengesa nhaka yevafambi vemu Africa nehurongwa hwekuita kondinendi iyi nzvimbo inotungamira yekushanya munyika munguva pfupi iri kutevera.
Sachigaro weATB, VaCuthbert Ncube, vakati Africa inofanirwa kusiyanisa dzakapfuma uye dzakawanda nzvimbo dzekushanya nenzira yekuti vashanyi vape nguva yakawanda kushanyira chigadzirwa chiripo.
VaNcube vakati kusimudzira matunhu nedunhu reAfrica zvinogona kuve danho rekuzvisarudzira iro richabatsirawo nyika dzemu Africa kudzikamisa zvinokanganisa COVID-19 mukushanya kuburikidza nezviwanikwa zvavo kuti zvigoverwe pakati pavo nekufamba kwezororo mukati mekondinendi.
Vati kukiya kumisikidzwa muEurope, United States of America, uye mimwe misika yekushanya yakaparadza kushanya kweAfrica nekukuvadza kukuru hupfumi hwenyika yese.
"Tinofanirwa kuvhura rwendo rwepakati pe Africa nekusiyana kwenzvimbo dzekushanya kusanganisira nzvimbo dzakapfuma dzenyika, nhoroondo, nenzvimbo dzakachengetedzwa dzinokwezva vanhu vedu kuwedzera mhuka dzesango dzinokwezva maEuropean, maAmerican, uye vamwe vashanyi vari kunze kwekondinendi," Akadaro Ncube.